Withings wuxuu bilaabayaa kormeerayaal cusub oo cadaadis dhiig oo kuxiran iPhone | Wararka IPhone
saxeexa Withings, oo loo yaqaan noocyadeeda kala duwan si loola socdo caafimaadkaaga ku xiran iPhone-ka, kaliya ayaa la sii daayay laba kormeerayaal dhiig kar cusub, BPM Muhiimka ah iyo Isku xidhka BPM.
Isku xirka BPM waa nooc la cusbooneysiiyay oo ah kormeeraha cadaadiska dhiigga ee caadiga ah ee Withings. Waxaa loogu talagalay inay ahaato mid aad u fudud in la qaato oo la arko akhrinta wadnaha iyo xididdada guriga, lana wadaago xogta dhakhtarkaaga markii loo baahdo.
Sida laga soo xigtay Withings, ka BPM Connect waa FDA la ansixiyay waxaana loogu talagalay inay bixiso cabbiraad sax ah oo ku saabsan garaaca wadnaha, cadaadiska dhiigga ee systolic iyo diastolic labadaba. Muuqaalkeeda midab-gadaal-gadaal marka loo eego heerarka heerarka la muujiyey, waxay bixisaa tilmaam cad oo kooban isla markiiba.
Qalabka kormeerka cadaadiska dhiigga, looma baahna in la helo taleefan casri ah si loo arko natiijooyinka. Waxay si toos ah ugu tuseysaa shaashaddaada dijitaalka ah inta aad u dirayso iyaga oo u maraya bluetooth ama wifi barnaamijka 'Withings Health Mate' ee aad ku rakibtay iPhone-kaaga.
Shirkadda ayaa sidoo kale ka billowday Yurub BPM Core, qalabkii ugu horreeyay ee "All-in-one" iibka macaamiisha guud ee cabbiri kara cadaadiska dhiigga, duub EKG, kuna dhageyso garaaca wadnahaaga stethoscope dijitaal ah. Waxay qaadataa oo kaliya 90 ilbidhiqsi in la qaato dhammaan saddexda akhris.
Withings wuxuu sheeganayaa in BPM Core loogu talagalay inuu u oggolaado isticmaaleyaasha la ogaado xaaladaha wadnaha ee halista ah, sida fibrillation-ka wadnaha ama wadnaha wadnaha. Waxay ka kooban tahay shaashad LED ah iyo xulashooyin waqtiyaysan oo horumarsan si ay si aad ah ugu fududaato qaadashada, aragtida, iyo wadaagista akhrinta wadnaha.
BPM Core waxaa lagu qiimeeyaa € 249,95 waxaana si gaar ah looga iibsan karaa Apple Store Yurub ama bogga internetka ee Guulaha. Ma imaaneyso Mareykanka ilaa dhamaadka sanadka.
Isku xidhka BPM, sidoo kale waa la heli karaa hadda. Waxaad ka iibsan kartaa gudaha Apple Store, Amazon, ama gudaha Withings leedahay a qiimaha 99,95 €
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Withings wuxuu bilaabayaa kormeerayaal cadaadis dhiig oo cusub oo ku xiran iPhone